mardi, 23 octobre 2018 22:06
Marovoay: Rendrika ny sambo ANJARA
Sambo niainga avy aty Marovoay ho any Manaratsandry no rendrika ny maraina teo, tokony ho tamin'ny 10 ora sy sasany, teo amin'ny reniranon'i Betsiboka izay mbola tafiditra amin'ny faritry ny fokontany Ambohimena, Kaominina Anosiala, Distrikan'i Marovoay.
29 tamin'ireo mpandeha no avotra soamantsara hatramin'ny ora anoratanay, vehivavy roa kosa no namoy ny ainy, ary telo tsy mbola mahatsiaro tena ao amin'ny hopitalin'i Marovoay.
Vinavinain'ireo olona sisa velona, any ho any amin'ny 20 any ny olona tsy hita popoka lasan'ny rano.
Miharihary indray ny gaboraraka sy ny tsy fanarahan-dalana fanao hatrizay tamin'ity indray mitoraka ity, tsy misy akory na dia manifold misy ny lisitry ny mpandeha aza.
mardi, 23 octobre 2018 22:00
Toliara: Nahemotra ny fitsarana ireo mpanao trafika sokatra
Nahemotra ho amin'ny 25 oktobra izao, raha tokony natao androany ny fitsarana ireo olona telo nahatrarana sokatra miisa 10 196 tao Betsinjaka Toliara tamin'ny volana aprily.
Miisa telo izy ireo, ka mpiambina ny iray, mpamahana sokatra ny faharoa ary tompontrano ny fahatelo.
Voalaza fa misy fifandraisana ara-pianakaviana ny mpitsara mandray an-tanana ny raharaha sy ny mpiaro ny voampanga.
Nanao valandresaka tao amin'ny foiben-toerany ao Antsakaviro-Antananarivo ny WWF omaly nanao fanairana mba tsy ho vitavita mora ity raharaha ity.
mardi, 23 octobre 2018 21:58
Takalonaina tao Ambatofinandrahana: Avotra i Bryan sy ilay mpitaiza azy
Tafaverina eo anivon'ny fianakaviana androany maraina ilay zazalahikely 4 taona, antsoina hoe: Bryan, sy zazavavy mpitaiza azy rehefa nataon'ny dahalo takalonaina nandritra ny.fanafihana fiara mitondra mpivaro-mandeha, avy namonjy tsena tao Ambatofinandrahana ny sabotsy 20 oktobra teo.
Faly ny mpiray tanàna. Tsy nambara kosa ny fomba nahavotsotra azy mianadahy ireo.
Mpivarotra mitety tsena no lasibatry ny sakandalana nataon'ny dahalo tamin'ny lalam-pirenena faha-35 ny tolakandron'ny sabotsy 20 oktobra, tamin'ny telo ora.
mardi, 23 octobre 2018 14:46
Toliara: Hotsaraina anio ireo mpanao trafika sokatra
Miisa telo izy ireo, mpiambina ny roa ary tompontrano ny fahatelo, izay nahatrarana sokatra miisa 10 196 tamin'ny volana aprily 2018.
Amin'ity andro talata 23 oktobra ity ny fitsarana azy ireo eto Toliara.
Nanao valandresaka tao amin'ny foiben-toerany ao Antsakaviro-Antananarivo ny WWF, nanao fanairana mba tsy ho vitavita mora ity raharaha ity.
mardi, 23 octobre 2018 14:44
Mahajanga: Nirehitra ny orinasa MAFOAM
Kila tsy nisy azo noraisina ny orinasa fanamboarana kidoro spaonjy MAFOAM eny amin’ny Hasyma Mazava huile-Mahajanga omaly hariva tokony ho tamin’ny fito ora sy sasany.
Simba sy may tao avokoa ny fitaovana famokarana spaonjy, naharitra ora roa sy sasany vao maty ny afo nefa na izany aza tsy niitatra tamin’ny manodidina izany noho ireo mpamonjy voina nalaky tonga.
Raha ny fanazavan’ny mpitantana ity orinasa ity, dia "court-circuit" no nahatonga ny firehetana izay nalaky tokoa noho ireo spaonjy.
mardi, 23 octobre 2018 10:14
Dr Jules Étienne: "Aleo handeha ny fifidianana"
Aleo ny Malagasy hifidy izay olona heveriny fa afaka hitondra fampandrosoana an'i Madagasikara. Tsy maintsy misy ny tsy afa-po amin'ny fikarakarana, fa aleo handeha ny fifidianana, hoy ity kandida narotsaky ny antoko MAFI (Madagasikara Fivoarana) ity, manoloana ny fitakian'ny kandida sasany ny hanokafana ny lisi-pifidianana sy hananganana fitsarana manokana hitsara ny raharaham-pifidianana.